Fiantohana kalitao - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Mino mafy izahay fa ny fiafaran'ny vokatra no laharam-pahamehana amin'ny fifehezana kalitao. Amin'ny alàlan'ny rafitra IPQC ny fizahana lahatsoratra voalohany, ny fizahana fizahana ary ny fanaraha-maso farany, ny kalitaon'ny fizotry ny famokarana dia azo fehezina sy hatsaraina mba hiantohana ny tahan'ny vokatra;
Mba hisorohana ny fivoahan'ny vokatra tsy mendrika, dia nanangana fizahana fizahana (FQC) izahay hanatanterahana ny fizahana andiany ireo vokatra novokarin'ny fizotrany mitovy sy ilay masinina iray ihany, ary ireo vokatra azo afindra amin'ny dingana manaraka aorian'ny fahaizan'izy ireo ;
Alohan'ny fitahirizana entana dia nanangana ny ekipa mpanara-maso ny vokatra vita (OQC, QA) izahay mba hanatanteraka ny fizahana rehetra manodidina ny vokatra. Alohan'ny hanaterana dia manara-maso ny santionany amin'ireo vokatra mahafeno fepetra izahay, mba hahazoana antoka fa ny vokatra dia tokony ho amin'ny fanjakana mahay rehefa aondrana mba hanomezana izay ilain'ny mpanjifa.
Mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra dia nividy nifandimby ireo fitaovana fanandramana avo lenta toa ny mpaka sary, altimetran'ny habe roa ary singa goba i Jixin, ary nanangana ivon-toerana fitiliana mazava tsara, izay nahatsapa ny fandrakofana feno momba ny famaritana vokatra manomboka amin'ny refy habe ka hatramin'ny asany tratra.
Manaraka hatrany ny fitsipiky ny fanomezana ny mpanjifa vokatra tsara indrindra miorina amin'ny vidiny mirary izahay. Izahay dia mifehy ny kalitaon'ny vokatra amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny "fisorohana" sy ny "fanaraha-maso", manome teknolojia fanaraha-maso kalitao azo antoka sy azo antoka ho an'ny famokarana, escort cnc machining, fametrahana mazava ary fanodinana stamping, ary hamita ny andraikitrao.
Ny fanabeazana sy ny fiofanana no fomba tsara indrindra hiantohana ny fivoahan'ny talenta. Manaraka seminera manara-penitra sy fivoriana fianarana kalitao izahay hanatsarana ny fahaiza-manao matihanina amin'ny mpiasa mahay kalitao, hahafehy ny haitao farany sy hamaly ny fepetra takian'ny fahaiza-manao amin'ny lahatsoratra samihafa.